Laamaha Ammaanka oo baadi-goob ku haaya dad dilal geystay | Baidoa24.com
Home WARARKA MAANTA Laamaha Ammaanka oo baadi-goob ku haaya dad dilal geystay
Laamaha Ammaanka oo baadi-goob ku haaya dad dilal geystay
Gabaldhicii shalay Maleeshiyaad hubeysan ayaa waxaa ay dad shacab ah ku dileen inta u dhaxeyso degaanada burdhiile iyo kabxaaley oo ku yaalla duleedka Magaalada Bledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan Saddex qof oo la sheegay inay ahaayeen beeraley.
Maleeshiyaadka ka dambeeyey dilkaasi ayayaa waxaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen,waxaana halkaasi gaarey Saraakiil ka tirsan Ciidamada Booliska Beledweyne,iyaga oo goobta ka qaadey dadkii la diley.
Taliyaha saldhiga Booliska degmada Beledweyne Muuse Salaad Weheliye iyo saraakiil kale oo Ka tirsan Booliska Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay sheegen inay baadi goob ku hayaan dadkii ka dambeeyey dilka dadka Shacabka ah,isla markaana ay cadaaladda horkeeni doonaan.
Warar Kala duwan ayaa ka soo baxayo qaabka u dilkan u dhacay ,waxaana Wararka qaar ay sheegayaan in ay salka ku haayso aano qabiil,iyada oo horey dilal kala duwan ay uga dhaceen deegaankaas.
Dhanka dowlada degaanka Soomaliada itoobiye wali ma jirto wax war ah oo Ka soo baxay madaamo ay Ku dhawyahiin goobtu dilka ka dhacay,waxaana qaar kamid ah ehelada dadka la diley ay dalbadeen inay cadaalad helaan.
Previous articleTirada Dadka u dhintay Caabuqa Corona virus oo gaartay 5,500 oo qof
Next articleWasaaradda Caafimaad oo shaacisey qorsho ka dhan ah Cudurka Carona